Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 4 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Saldhigyada Xabashida Ee Degmada Baardheere Oo La Duqeeyay.
Ciidamada Xarakada Alshabaab ayaa madaafiic ku garaacay Saldhigyo ay Ciidamada Xabashida ku leeyihiin duleedka degmada Baardheere ee Gobolka Gedo. Duqeyntan oo loo adeegsaday hoobiyeyaal ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa ay dhacday fiidkii hore ee habeenkii Xalay ee Talaadada ay soo galeysay. Dad ku sugan magaalada Baardheere waxay sheegeen inay […]
Gaari Dagaal oo Ciidamada Kenya looga gubay Gobolka Gedo.
Kolonyo ay la socdeen Ciidamada Dowladda Kenya ayaa lagu weeraray duleedka magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ee Koonfur galbeed Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa la sheegayaa inay jidka u galeen kolonyo gawaari ah oo ay la socdeen Ciidamo Kenya, kuwaas oo marayay inta u dhaxeysa deegaannada Faafax-dhuun […]
Suuriya.. Dad Ku nool Magaalo Go’doonsan Oo Hindisay Farsamo Shidaalka Lagu Soo Saaro !. (Video)
Afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa qeybo ka tirsan deegaannada kuyaalla Koonfurta dalka Suuriya ay ku jiraan xaalad go’doon ah oo ay kusoo rogeen Ciidamada Nidaamka Nuseyriga ee uu hogaamiyo Bashaar Al-Asad. Go’doonkaas waxa uu si weyn u sameeyay dadka Muslimiinta ah ee deegaanadaas ku nool, iyadoo Ciidamada Nuseyriyada ay […]
Sawir : Wiil uu dhalay Hogaamiyaha Daalibaan oo galay Camaliyad Istish-haadi ah.
Xarakada Daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in Wiilka curadka ah ee uu dhalay Hogaamiyaha Ururkaasi Al-Mowlawi Heybatullaah inuu fuliyay Camaliyad Istish-haadi ah. Cabduraxmaan Mowlawi Heybatullaahi oo ku magac dheeraa “Khaalid”, islamarkaana 20 jir ah ayaa gaari Miineysan ku weeraray Saldhig Meliteri oo Ciidamada Xukuumadda Afghanistan ay ku leeyihiin degmada […]
Ciidamada Jabuuti oo Qarax lagula eegtay magaalada Buulo-Barde.
Ugu yaraan Seddax ka tirsan Ciidamada Jabuuti ee ku sugan magaalada Buulo-barde ee gobolka Hiiraan ayaa geeriyooday, dhowr kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax lagula beegsaday magaaladaasi. Wararku waxay sheegayaan in qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow Garoonka diyaaradaha ee magaalada, wakhti Ciidamada Jabuuti ay ku guda jireen howlo […]
Seddax Yahuud ah oo lagu gowracay Daanta Galbeed iyo Ninkii dilay oo la toogtay.. “Akhri dar-daarnkiisa”.
Seddax ka mid ah Yahuudda xoogga lagu dejiyay dhulka Filastiin ayaa la dilay, mid Afaraadna wuu dhaawacmay markii Nin Muslim ah oo Filastiini ah uu howl-gal ka fuliyay tuulada “Nebi Saalix” ee bariga magaalada Ramallah. Warbaahinta Yahuudda waxay sheegeen in la toogtay Ninka weerarkaas fuliyay, kaas oo lagu sheegay inuu […]